ဖွဲ့တည်ရာမဂ္ဂဇင်း၊ ဗော်ဒဂါတစ်ပုလင်းနဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဖွဲ့တည်ရာမဂ္ဂဇင်း၊ ဗော်ဒဂါတစ်ပုလင်းနဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်	Posted by mm thinker on October 14, 2008
Posted in: Announcement, Experience.	Tagged: Announcement, Experience.	– ၁ –
နောက်တစ်ပတ်ဆို ထွက်ပါပြီ၊ နောက်တစ်ပတ်ဆို တကယ် ထွက်ပါပြီ…ဆိုပြီး မဆုံးနိုင်သော နောက်တစ်ပတ်တွေပြီးသွားတဲ့နောက် မဂ္ဂဇင်း တကယ်ထွက်လာပါပြီ။ ကြန့်ကြာနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ဖောမက်အသစ်မှာ အခြေမကျနိုင်ခြင်း၊ သင်ကာ ခရီးရက်ရှည် ခြေရှည်နေခြင်း၊ ဟန်သစ်ငြိမ် ဘန်ကောက်ဒိုးနေရခြင်း၊ အခြားသော မြန်မာကျောင်းသားများရေးရာ၊ စာမူလက်ကျန်တွေ စာစီ၍ မပြီးခြင်း၊ ထွန်းတောက်နေ သင်တန်းတက်နေရခြင်း…စသည်ဖြင့် စုံနေသည်။ ထွက်သင့်သည်ထက် အတော်ကြီးနောက်ကျမှပင် ထွက်တော့သည်ဆိုရမည်။ စောင့်ရတဲ့သူတွေလည်း မျက်နှာပူရသည်။ – ၂ –
ဒီတစ်လထုတ်မှာ သုတထက် ရသက ပိုကဲသည်။ မဂ္ဂဇင်းပြင်ဆင်ပုံကို သွက်အောင် လုပ်ထားသည်။ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့လည်းလုပ်ပေးထားသည်။ ကလောင်အင်အားလည်း အားရပါသည်။ ပါနေကြ အင်အားကြီးကလောင်များဖြစ်သည့် ငြိမ်းဇေဦး၊ ထူးမြတ်၊ လာရာ စသူတို့ အပြင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တန်းမှ မတူးတူးသာ၊ အယ်ဒီတာမမတစ်ဦးဖြစ်သူ ပိုးတီတို့လည်း ပါလာသည်။ (မမွန်းသက်ပန်ကတော့ လေနဲ့ စာမူပေးထားသည်။ ရအောင် ဓားပြတိုက်ရဦးမည်။) မတူးတူးသာအကြံပြုသဖြင့် ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၏ ဘာသာပြန်လက်ရာ “ကွိ”ကိုလည်း အခန်းဆက် စတင် ဖော်ပြဖြစ်သည်။ စာအုပ်မူရင်းကို သူ မငှားချင်လည်း အတင်းတောင်းပြီး ငှားထားလိုက်သည်။ “မင်း ဂျာနယ်လစ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးရမယ်” ဟု ဆရာတပိုင်းလည်းဖြစ်၊ သောက်ဖော်သောက်ဖက်လည်းဖြစ်သူ ဆရာမြင့်သူရက ပြောဖူးသည်။ – ၃ –
ပြီးခဲ့သည့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ ဟန်သစ်ငြိမ်၊ ထွန်းတောက်နေတို့နှစ်ယောက်နှင့် မဂ္ဂဇင်းကို တွန်းပြီး အချောသတ်ကြသည်။ တခါဖူးမျှ ရေစက်မဆုံဖြစ်သေးသော အရက်ဖြစ်သည့် ဗော်ဒဂါတစ်လုံးရထားသဖြင့် ဗော်ဒဂါကို သံပုရာရည်နဲ့ မျှောချကာ သုံးယောက်စလုံး ဇယ်ဆက်အောင် လုပ်ရသည်။ (ညိမ်းညိုတို့ မင်းကျန်စစ်တို့ပြောတော့ ချဉ်ပြုံးပြုံးဆိုပေမယ့် ပြင်းလိုက်တာ လွန်ပါရော) စနေနေ့ညမှာ မွေးနေ့ပါတီရှိ၍ သုံးယောက်သား သွားပြီး တီးဝိုင်းနဲ့ ဖျော်ဖြေလိုက်ရသေးသည်။ သောက်လိုက်သည်မှာလည်း ဝက်ဝက်ကွဲ။ မနက်ကျတော့ ဘာမှဖြစ်မနေအား။ မဂ္ဂဇင်း ဆက်ကိုင်ကြသည်။ ဗော်ဒဂါလက်ကျန်လေးလည်း ဆက်ဖြိုကြသည်။ တကယ်ဆို လူတွေက ဒေါင်းချင်နေပြီ။ စာတွေကို အပြူးအပြဲစစ်နေရသည်။ ဟိုဟာကျန် ဒီဟာကျန်မဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ရသည်။ (အရင်တလက မပန်ဒိုရာ၏ စာမူကျန်ခဲ့၍ အယ်ဒီတာများမူးနေ၍ ကျန်ခဲ့လေသည်ဟု ကြေညာမောင်းထုခြင်း ခံရသတတ်။) ဒီတော့ အရေးကြီးတဲ့လူ စာမူတွေ ပါအောင်စစ်ရသည်။ ပြီးသွားတော့လည်း PDF ပြောင်းတော့ MS Publisher မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်က ဇာတိပြသည်။ “အ”အက္ခရာတွေ “A”ပြောင်းပြီး၊ “ဥ”တွေက “U”ဖြစ်ကုန်သည်။ သေဟဲ့ နန္ဒိယ ဆိုပြီး အမောဆို့ရသည်။ ဒါတောင် အကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်ပြီးသား။ အမေက Aမေ ဖြစ်ကုန်ပြီး ကိုလင်းဦး နာမည်က လင်uးီး ဖြစ်သွားသည်။ ဒါပေမယ့် ဘာရမလဲ သုံးယောက်သား ကြံလိုက်တာ ပြေလည်သွားသည်။ (ပြေလည်အောင် လုပ်နည်းကို ဟန်သစ်ငြိမ်နဲ့ ထွန်းတောက်နေတို့က ပို့စ်ရေးပါလိမ့်မည်။) ပြီးပြန်တော့ ဗိုင်းရပ်စ်နာကျနေတဲ့ ကျုပ်တို့ လက်ပ်တော့ပ်တွေမှာ ဖိုင် Upload တင်တာ တစ်နေပြန်သည်။ ဒီတစ်လ စာမျက်နှာ အများဆုံးဖြစ်သလို ဖိုင်ဆိုဒ်လည်း ယခင်ကထက်ကြီးသည်။ တော်တော်ကြီးလုပ်ယူမှ Upload ရသည်။ – ၄ –
ထွန်းတောက်နေက ညဉ်းသည်။ “ဒီလောက်ပင်ပန်းတာတောင် မနားချင်ကြသေးဘူးကိုး”တဲ့။ ဖောမက် အသစ်ချတာကြောင့် ဒီတစ်လ ကြာရခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်လများအတွက် Procedure ကိုလည်း ပြောင်းကြဖို့ ညှိထားသည်။ ကျနော်တို့ကတော့ တစ်ခုခုပေးလိုက်ပါပြီ။ စာဖတ်သူတွေပဲ တော်၏ ရှော်၏ ဆုံးဖြတ်ကြပါကုန်။
← အချစ်ဆိုသည်မှာ…	ခေတ်အမျိုးမျိုးမှ မြန်မာဟာသစာပေ (၂) →	Pages	about